Isicwangcisi, usetyenziso olulula lokusebenzisa umsebenzi | Ubunlog
Isicwangcisi, usetyenziso olulula lokusebenzisa umsebenzi
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga uMcwangcisi. Yi le Ukusetyenziswa kolawulo lomsebenzi, olunokunceda abasebenzisi ukuba baququzelele kwaye baqokelele izimvo / imisebenzi yabo. Ngokubanzi, yinkqubo elula ukuyisebenzisa, kwaye inikezela ngeempawu ezinokuba luncedo kumsebenzisi.
Namhlanje kukho izixhobo ezahlukeneyo kunye neenkonzo ezisivumela ukuba siququzelele kwaye silawule imisebenzi. Okwahlula oku kwabanye kukuba yenzelwe ikakhulu i-Gnu / Linux. Esi sixhobo asifumaneki kulo naliphi na iqonga ngaphandle kweGnu / Linux.
Ku malunga iapps yomthombo ovulekileyo yolawulo lomsebenzi enikezela ngesandla esihle sezinto ezibalulekileyo. Oku kuya kusinceda xa siququzelela imisebenzi, ngelixa sibonelela ngamava omsebenzisi olungileyo. Siza kukwazi bona imisebenzi yethu ngendlela enemibala, yongeza amanqaku, jonga ii-URL, wenze amaxesha abekiweyo kwaye ungeze iithegi.
1 Iimpawu zoCwangciso ngokubanzi
2 Faka uMcwangcisi ku-Ubuntu
Iimpawu zoCwangciso ngokubanzi
Phakathi kweempawu ezibonelelwa yile nkqubo kubasebenzisi, sinokufumana oku kulandelayo:
Inkqubo inika amandla okwenza yenza / uququzelele iiprojekthi ezahlukeneyo.
Isicwangcisi asiphelelanga ekusebenzeni kwalapha ekhaya, naso inokuvumelanisa iakhawunti yethu yeTodoist kwaye usebenze ngeeprojekthi zakho, amacandelo kunye nemisebenzi ngokuthe ngqo kwesi sicelo.
Siya kuba nayo Inkxaso yokurhuqa kunye nokuwisa imisebenzi.
Inqaku elinomdla liya kuba linokwenzeka yenza amacandelo okuqhubela phambili ukwahlula imisebenzi / izimvo.
Sinako ishedyuli imisebenzi okomzuzwana othile. Ukongeza ikwaxhasa imisebenzi ephindaphindayo.
Iya kusivumela yongeza izikhumbuzo ezininzi zomsebenzi ofanayo.
Siya kuba nethuba lokuba yongeza imisebenzi engezantsi.
Sinako nika izinto eziphambili ngokubaluleka yemisebenzi esiyongezileyo.
Inkqubo iya kusinika i Ukukwazi ukukhetha umbono wedeshibhodi ukulungiselela ngcono, okanye ukwenza lula ukujonga yemisebenzi xa kuninzi okuqhubekayo.
Ixhasa iithegi ukucoca ngokulula izimvo zethu okanye imisebenzi.
Inkqubo isinika iinketho zomxholo omnyama kunye nokukhanya.
Inayo Inkxaso ye-emoji yomsebenzi / isihloko seprojekthi ukuyenza ibonakale inomtsalane kwaye inentsingiselo.
Siza kusinika i Ukukhetha ukuthumela imisebenzi / izimvo nge-imeyile, okanye wabelane ngazo njengefayile yokumakisha.
Siya kuba nakho ukubanakho ukuthumela idatha ngaphandle kweintanethi.
Kule nkqubo siza kufumana ifayile ye- ukhetho lokugcina usetyenziso lusebenza ngasemva kwaye ke okanye uphulukane nezikhumbuzo, okanye ukufikelela ngokukhawuleza kwinkqubo.
Unokwenzeka lungisa ifomathi yewotshi.
Umdibaniso nenkqubo yekhalenda emiselweyo.
Ezi zezinye zeempawu zale nkqubo. Banga Nxibelelana nazo zonke ngokweenkcukacha ukusuka kwi iwebhusayithi yeprojekthi.
Faka uMcwangcisi ku-Ubuntu
Kuninzi losasazo lweGnu / Linux, le nkqubo singayifaka njenge flatpak iphakheji. Ukuba usebenzisa Ubuntu 20.04 kwaye awunayo le teknoloji inikwe amandla kwinkqubo yakho, ungaqhubeka Isikhokelo ukuba ugxa wakhe ubhale kule bhlogi kwithuba elidlulileyo.
Nje ukuba sikwazi ukufaka iiphakheji zePlppak kwinkqubo yethu, siya kufuna kuphela ukuvula i-terminal (Ctrl + Alt + T) kunye sebenzisa lo mthetho ulandelayo wokufaka:
Emva kofakelo, sinokukhangela isiqalisi senkqubo kwikhompyuter yethu. Inako kananjalo Qalisa inkqubo ngokuchwetheza kwisiphelo sendlela:
ukuba susa lo mcwangcisi womsebenzi kwinkquboKuya kuba yimfuneko ukuvula i-terminal (Ctrl + Alt + T) kunye nokwenza umyalelo kuyo:
Le nkqubo yayiyilelwe ukuba yenzelwe amava enkqubo yokusebenza engenamthungo. Ukuba ufuna amava angcono omsebenzisi, ungazama ukufaka umxholo we-OS kunye nee icon. Kodwa oku kukukhetha.
Nokuba unayo yonke imisebenzi enikezelwa yile nkqubo, kulula kakhulu ukuba ucwangcise imisebenzi yakho. Ikwabonelela ngokujongana nokulula komsebenzisi okulungele bonke abasebenzisi. Ayinamsebenzi ukuba ufuna ukulawula inani elikhulu lemisebenzi usebenzisa yonke imisebenzi, okanye ufuna ukongeza uluhlu lwezinto eziza kwenziwa, isiCwangcisi sisixhobo esinokuba luncedo kakhulu. Ungandwendwela iphepha kwiGitHub yeprojekthi ngolwazi oluthe kratya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Isicwangcisi, usetyenziso olulula lokusebenzisa umsebenzi
IArdor 6.9 ifika nenkxaso yeApple M1, ukuphuculwa kokongezwa kunye nokunye
Akakagqitywa okwangoku, kodwa Ubuntu 21.10 Impish Indri unokuhlala kwi-GNOME 40